Sucuudiga Oo Toogasho ku Fuliyay Sadax Askari Oo Lagu Eedeeyay Qiyaano Qaran. – Awdalmedia
Sacuudi Carabiya ayaa toogasho ku dishay seddex askari maanta oo Sabtidi ah, kuwaa oo ay ku eedeysay in ay galeen “khiyaano qaran,” iyada oo aan faahfaahin laga bixin cida ay boqortooyadu rumeysan tahay in raggaasi ay gacan siiyeen.
Wakaaladda wararka u faafisa dowladda ee Sacuudi Carabiya ayaa shaacisay in raggan ay yihiin askar ka shaqeynayay wasaaradda difaaca, isla markaana lagu helay dambi aan weli la shaacinin nuuca uu yahay.
Faahfaahin kama aysan bixin kiiska raggaan ku caawiyeen cadawgeeda waxay u aragto boqortooyada. Sacuudi Carabiya ayaa la dagaallameysa kooxda Xuutiyiinta Yemen ee Iiraan taageerto. Iyada oo Boqortooyada sida oo kale u aragta Iran in ay tahay Cadowga gobolka bariga dhexe.
Xukuumada riyaad ayaa sheegtay in saddexda nin lagu xukumay maxkamada, isla markaana amar dambe oo kasoo baxay uu noqday mid dil ahaa.
Sacuudi Carabiya ayaa fulisay xukunkii seddexaad sida lagu sheegay tirooyin ka soo baxay Amnesty International, Sanadkii 2019, boqortooyada waxay dishay 184 qof.
Boqortooyadu waxay raacday Shiinaha iyo Iiraan siday u kala horreeyaan liiska dadka dilka lagu xumo ee sida deg dega ah loo qur-goooyo.